Antso ho fampiroboroboana ny aterineto eto Madagasikara.
2007-10-30 @ 17:00 in Kolontsaina
Alohan'ny hametrahana ity hafatra ity izay tsy aritro fa apetrako eto ihany dia any amin'ny Vaovao Iraisam-Pirenena no misy ny lahatsoratra momba ny hala-jaza sy ny halatra taova.
Efa imbetsaka no voaporofo fa kinga amin'ny fikirakirana haitao vaovao ny eto Madagasikara. Hibaribary aminao rehefa mitety faritra ianao fa tsy voatery natokana ho an'ny sarangan'olona ambony monina an-tanan-dehibe ihany io fampiasana haitao vaovao io. Tsikaritra aza fa maro ny olona mahay mampiasa finday, VCD na MP3, MP4 ary mitady ny fomba rehetra ahafahana mampandeha ireny fitaovana ireny any amin'ny faritra maro tsy tongan'ny herin'aratra akory.
Hita taratra ao anatin'izany haitao maro izany fa fitaovana iray azo antoka ho enti-mampandroso an’i Madagasikara ny fampiasana aterineto.